Online Saptari, Author at Online Saptari
Home / Author: Online Saptari
क्र.सं. स्थानीय तहको नाम समावेश गाविस / नगरपालिका वडा संख्या जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) प्रस्तावित केन्द्र १ राजविराज नगरपालिका राजविराज नगरपालिका, मलेठ, बोरिया (३-७), फर्सेट, हरिहरपुर (६), बिष्हरिया, कोमध्येपुरा (४-७), देउरी भौवा र दिधुवा गा.वि.स. १६ ६९८०३ ५५ साविक राजविराज नगरपालिका कार्यालय २ कञ्चनरुप नगरपालिका कञ्चनरुप नगरपालिका र भैरवा गा.वि.स., १२ ३५२३८ ११७.३४ साविक कन्चनरुप नपा […]
Posted by Online Saptari लेख
अरूण कुमार साह (अनिल) । दिनको झल्को विहानीले दिन्छ । कहिलेकाही अप्रत्यासित घटना संकेतमा खराब देखिए पनि परिणाममा फलदायी हुन्छन् । त्यसैको परिणाम हो मधेश आन्दोलन । जुन कुरा कसैले पनि चिताएका थिएन् । मधेश आन्दोलनको विजारोपन हुँदै गर्दा त्यसले अर्कै भाव र धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको भान हुन्थ्यो । अर्थात मुलुकमा सदियौंदेखि उत्पीडनको जाँतोंमा पिल्सिदैआएका मधेशी […]
Posted by Online Saptari जानकारी, पर्यटक स्थल
बोधराज सुवेदी, महुली । नेपाल अर्थतन्त्रको हिसावले विश्व मानचित्रमा तुलनात्मक रुपमा गरीब भए पनि यहाँको भौगोलिक विविधताको साथै मनोरम प्राकृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक महत्व बोकेका कैयों धरोरहरुको धनी रहेको छ । यीनै सम्पदाको आधारमा नेपालको विकासमा प्रसस्तै सम्भावनाहरु आंकलन गर्ने गरिएको छ । तर, आफैंभित्र रहेको प्रचुर सम्भावनाहरुलाई पहिचाहन गर्न नसक्दा नेपाल र नेपालीहरुले सधैंभरि […]
सप्तरीको लोहजारा तालमा (दह) पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । पर्यटकीय स्थलका रूपमा जीर्णोद्धार गरिएको  लोहजारा तालमा आन्तरिक पर्यटकले खचाखच भरिने गरेको छ । जाडोयाममा वनभोज (पिकनिक) मनाउने समूहको जिल्लामा पहिलो रोजाइ लोहजारा ताल नै बनेको छ । यसका साथै अङ्ग्रेजी महिनाको अन्तिम तथा नयाँ वर्ष मनाउन लोहजारा ताल खचाखच भरिने गरेको छ । हिजोआज […]